Waaheen Media Group » Nin ay Jebiso Liqday oo Caloosheeda Maydkii laga soo saaray
Browse:Home Articles Nin ay Jebiso Liqday oo Caloosheeda Maydkii laga soo saaray	Nin ay Jebiso Liqday oo Caloosheeda Maydkii laga soo saaray
Comments Off	Maydka nin u dhashay dalka Indonesia oo la waayay ayaa laga helay caloosha jebiso liqday, sida uu sheegay booliska. Akbar oo ku noolaa jasiiradda Sulawesi, ayaa la waayay Axaddii.
Mas’uul ka tirsan booliska Indoneisa ayaa BBC-da u sheegay in intii lagu guda jiray baadigoobka ninkan 25 sano jirka ahaa, la arkay jebiso wayn oo ay tuhmeen inay liqday ninka.
Jebisada oo dhirirkeedu uu gaaryay 7 mitir ayaa caloosheeda la dilaaciyay, waxaana halkaa laga soo saaray meydka ninkaasi. Waa dhif iyo naadir in jebiso ay disho islamarkaana cunto bani’aadamka.
Dadka deegaanka ayaa booliska u sheegay in Akbar uu maqnaa muddo 24 saacadood ah.” Waa la raadiyay balse waa la waayay Akbar. Dadka deegaanka ayaa arkay jebiso aan dhaqaaqeyn oo god ku jirto. Waxayna tuhmeen inay liqday ninka la raadinayo, ayuu yidhi Mashura oo ka tirsan booliska”.